Lalao sy fangatahana 9 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (8 Janoary) | Vaovao IPhone
Lalao sy fangatahana 9 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (8 Janoary)
Jose Alfocea | | Fampiharana iPhone
Androany, amin'ny alahady, dia miraikitra ny lambam-pandalovako ary tonga tara mihoatra ny mahazatra aho. Saingy araka ny fitenenana, "tsy tara loatra raha tsara ny fahasambarana" ka hamaranantsika ny herinandro voalohany amin'ny 2017 amin'ny iPhone News amin'ny fomba tsara indrindra azontsika atao, miaraka amin'ny fifantenana lalao sy fampiharana maimaimpoana. Maimaimpoana ary maimaimpoana ary mandritra ny fotoana voafetra satria tena mandoa vola izy ireo izay nametrahan'ny mpamolavola azy ireo.
Aza adino izany manan-kery ireo fampiroboroboana ireo tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, ary tsy afaka manome toky mandra-pahoviana izy ireo vao manan-kery. Noho izany, raha liana amin'ny iray amin'izany ianao dia aza mandany fotoana be dia be mieritreritra ary apetaho amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch anao.
1 Isa ary manisa ny lalao matematika mianatra aloha
2 Sary an-tsoratra - Manova lahatsoratra amin'ny sary
3 Halatra sary
4 Vata fihaonambe - Fanamarihana, lahasa ary drafitra
5 Fitsipika momba ny famolavolana tranonkala - Kaody HTML sy CSS
7 Z Hero
8 Ady Super Tank
9 Zombies an'i Satana
Isa ary manisa ny lalao matematika mianatra aloha
«Isa sy isa» dia lalao fanabeazana natao ho an'ny zazalahy sy zazavavy hatramin'ny dimy taona taona izay hahatonga azy ireo hanakaiky kokoa ny tontolon'ny matematika sy ny fiasan'izy ireo voalohany amin'ny fomba tsotra sy mahafinaritra.
Ity rindrambaiko ity dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Lalao isan'ny lalao mahafinaritra€ 4,49
Sary an-tsoratra - Manova lahatsoratra amin'ny sary
Ny lohatenin'ity rindranasa ity dia mamela toerana kely ho an'ny sary an-tsaina, noho izany dia ho azonao an-tsaina an'izay ilaina anao. Na izany aza, sarotra amiko ny mahatakatra ny sakany, izany dia hoe tsy tsara indrindra aho. Saingy satria maimaim-poana izy io, dia hampidina azy io isika ary avy eo dia ho hitantsika izay ataontsika amin'izany ovay ny sary ho saryNa dia mieritreritra an'izany aza aho izao, ho an'ireo hafatra ao amin'ny Twitter dia azontsika ampiasaina tsara izy io.
Ny "Text Image" dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Sary an-tsary - Manova lahatsoratra amin'ny sary - Azo ampiana ny fanelingelenana ny lahatsoratra€ 1,09
Sary mangalatra dia "ilay fampiharana izay hahagaga ny namanao mandritra ny fahavaratra rehetra." Heveriko ve izany sa tokony hanavao ny famaritany ny mpamorona an'ity app ity? Ny hafetsena dia izay rehefa mihevitra ny namana fa maka sary anao izy dia tena maka sary ny tenany fa tsy fantany. Tsy nanome hevitra aho! Saingy tsy misy dikany ny pikantsary amin'ilay famaritana ny fampiharana. Fampiasana: aotra. Fialamboly: mistery.
Ny "sary mangalatra" dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Vata fihaonambe - Fanamarihana, lahasa ary drafitra
Amin'ity tranga ity dia miatrika rindrambaiko natao ho an'ireo mpampiasa mila izahay handray an-tsoratra. "Miasa tsara amin'ny lahateny, kilasy any amin'ny oniversite, fihaonambe momba ny asa fandraharahana, fivorian'ny birao, asa fanaovan-gazety, ary amin'ny toe-java-misy rehetra ilainao manoratra na misambotra zavatra."
Ny "boaty fihaonana" dia misy vidiny mahazatra 2,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Fitsipika momba ny famolavolana tranonkala - Kaody HTML sy CSS
Izy io dia taranja hianaranao HTML sy CSS amin'ny ambaratonga fototra, eny, tsy maintsy mahay teny anglisy ianao satria amin'ity fiteny ity ihany no ahitana azy.
Ny vidiny mahazatra 0,99 euro fa izao azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Fotoam-pianarana o «Fotoam-pianarana» dia fampiharana izay manampy ny mpianatra hitantana ny fotoam-pianarany amin'ny fomba mahomby kokoa. Ho azonao atao ny mandinika ny fotoana laninao nandalinana, raha nandany fotoana be loatra tamina lohahevitra iray ianao nefa tsy niraharaha lohahevitra iray hafa, alao sary an-tsaina sy zarao ny fandrosoanao, ary maro hafa.
Ny vidiny mahazatra an'ny Fotoam-pianarana 0,99 euro izany fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Z Hero lalao mifototra amin'ny "kapoka" io. Tsy maintsy mikitika ny efijery ianao hanovana ny lalana, hitsambikina, hanafika biby goavambe, sns. Lalao miaraka amin'ny mekanika tsotra nefa mampiankin-doha satria ny mikasika tokana dia ny fanaovanao azy amin'ny fotoana mety.
Ny vidiny mahazatra an'ny Z Hero 0,99 euro izany fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra.
Ady Super Tank
"Super Tank Battle" dia misy vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Super Tank Battle - myCityArmymaimaim-poana
Zombies an'i Satana
Ao amin'ny Zombie Satans ianao dia ho iray amin'ireo sisa velona farany amin'ny apokalypsy zombiee hiampita ny tanàna manimba ny maty sy ny mpanohitra.
Ny "Zombies an'i Satana" dia manana vidiny mahazatra 0,99 euro fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana tanteraka mandritra ny fotoana voafetra.
Zombies an'i Satanamaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fangatahana 9 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (8 Janoary)
Marlon dia hoy izy:
Salama, José Alfocea. Manoratra aho, satria mila mailaka maika izay mamela ahy hanoratra izay ao amin'ny efijery mini iPad-ko. Na lalao io na zavatra hafa. Inona no azoko ampiasaina na sintonina?
Valiny tamin'i Marlon
Jose Alfocea dia hoy izy:
Salama Marlon. Ampifandraiso fotsiny ny iPad amin'ny Mac anao ary miaraka amin'ny QuickTime dia azonao atao ny manoratra ny efijery an'ny iPad anao
Valiny tamin'i Jose Alfocea
Ny Google Kalandrie dia mifamatotra amin'ny fampiharana ara-pahasalamana an'ny iPhone
Apple dia te hankalaza ny Taombaovao sinoa miaraka amin'ireo vola vaovao ireo